“Aniga ma raadiyo Rikoorrada, laakiin iyaga ayaa i soo raadsada” – Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Europe) 15 Okt 2019. Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa sheegay inuusan isaga raadsanin rikooradh jibinta, laakiin si dabiici ah ay iyagu ugu yimaadaan, wuxuuna hadalkiisan imaanayaa kaddib markii uu xalay dhaliyay goolkiisii ​​700-aad ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta.
Cristiano Ronaldo ayaa ciyaarta kaddib wareysi uu ku bixiyay warbaahinta wuxuu ku sheegay:
“Ma jiro qof gaari kara tirada goolashan, waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo asxaabteyda kuwa hadda iyo kuwii hore, sidoo kale tababarayaasha, iyo qof kasta oo iga caawisay inaan gaaro halka aan hadda joogo”.
“Xaqiiqdii waan ka xumahay guuldarada ina soo gaartay, laakiin waxaan ku faraxsanahay kooxdeyda”.
“Xaqiiqdii ma aqaano imisa rikoodh ayaan jabiyay, laakiin waa inaan ku raaxeystaa xilligan, waana u mahad celinayaa kuwa iga caawiyay inaan gaaro rikoodhkan gaarka ah”.
“Rikoorrada iyaga ayaa si kumeel gaar ah iigu yimaada, aniga ma raadsado laakiin iyaga ayaa i raadinaya”.
Waxaa xusid mudan in Cristiano Ronaldo uu ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan u dhaliyay kooxdiisa Juventus 4 gool, wuuuna caawiyay 4 gool kale, 8 kulan uu ciyaaray, sidoo kale sannadkan 2019 wuxuu u dhaliyay xulkiisa qaranka Portugal 10 gool, kaliya 8 kulan uu u ciyaaray.